ဘယ်လို AUTOCAD မှ PDF ကိုပြောင်းမှ - AUTOCAD - 2019
PDF ဖိုင် DWG ပြောင်း
က MS Word, အဖြစ်မဆိုစာသားကိုအယ်ဒီတာ၎င်း၏စွန့်ပစ်ခြင်းမှာဖောင့်တစ်ဦးကြီးများအစုံရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးစံသတ်မှတ်ချက်, လိုအပ်ပါကအမြဲ Third-party ဖောင့်များ၏အကူအညီဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်ပါသည်။ သူတို့ကအမြင်အာရုံကွာခြားပေမယ့်တကယ်တော့နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်၌စာသားရဲ့ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုပြောင်းလဲဖို့နည်းလမ်းရှိသည်။
အပြင်စံအမျိုးအစား မှစ. , ဖော, bolded စာလုံးစောငျးနဲ့မျဉ်းသားနိုင်ပါသည်။ ရုံနောက်ဆုံးအကြောင်းကို, အမည်ရ, ဘယ်လို, ထိုနှုတ်ကပတ်တော်၌ကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါးအတွက်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်စာသားစကားလုံးတစ်လုံးသို့မဟုတ်အပိုင်းအစနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလေးပေးရန်။
သင်သည်အုပ်စု "စာလုံး" (က "ပင်မစာမျက်နှာ") တွင်တည်ရှိသည် tools တွေကိုမှာအနီးကပ်ကြည့်ရင်အမှန်သုံးဇာတ်ကောင်ရှိပါတယ်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်, အဘယ်သူကိုအသီးအသီးအရေးအသားစာသားတိကျတဲ့အမျိုးအစားများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
F ကို - (ရဲရင့်) ရဲရင့်;
K သည် - စာလုံးစောင်း;
W - မျဉ်းသား။
သင်သည်ထိုသူတို့ကိုသုံးပါလျှင် control panel ထဲကပေါ်မှာရှိသမျှသောဤအက္ခရာများ, စာသားတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားရသောပုံစံကိုပြသထားပါသည်။
အဆိုပါပြီးသားတိကျမ်းစာ၌လာသည်စာသားကိုအလေးပေးက select လုပ်ပါ, အဲဒီနောက်အက္ခရာကိုနှိပ်ဖို့ B က အုပ်စုတစ်စု "စာလုံး"။ စာသားသေးကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်လျှင်, ဒီ button ကို click နှိပ်, စာသားရိုက်ထည့်, ပြီးတော့မျဉ်းသား mode ကိုပိတ်လိုက်ပါ။
ကောင်စီ: document တစ်ခုစကားလုံးသို့မဟုတ်စာသားအလေးပေးဘို့ကိုလည်းသင်ပူ key combination ကိုသုံးနိုငျ - "ကို Ctrl + ဦး".
မှတ်ချက်: မျဉ်းသားထားသည့်အရှင်စကားလုံးများကို / အက္ခရာများအသုံးပြုပုံဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကိုအကြားကွာဟချက်ထဲမှာမသာ, အောက်ခြေလိုင်းကထပ်ပြောသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ခုနှစ်တွင်လည်းသီးခြားစီအဘယ်သူမျှမနေရာသို့မဟုတ်ကွာဟချက်သူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အတူစကားလုံးမျဉ်းသားထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါကြည့်ပါ။
1. သင်ကွာဟချက်ထဲမှာ underscore ကိုဖယ်ရှားလိုသည့်စာသားကိုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းရွေးချယ်ပါ။
2. အုပ်စုပေးတဲ့ dialog box ကို Expand "စာလုံး" (tab ကို "အိမ်") သည်၎င်း၏ညာဘက်အောက်ထောင့်ထဲမှာမြှားအပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
3. အောက်မှာ "အောက်လိုင်းတား" သို့သော်လည်း parameter ကိုသတ်မှတ် "သာလျှင်ဆိုသောစကားကို" နှင့်စာနယ်ဇင်း "အိုကေ".
4. ကွာဟချက်အတွက်အလေးပေးပျောက်ကွယ်သွား, တစ်ချိန်တည်းမှာစကားတို့ကိုအလေးပေးရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
1. သင်နှစ်ဆ bar ကိုအလေးပေးလိုသောစာသားကိုရွေးချယ်ပါ။
2. ပွင့်လင်းအုပ်စုပေးတဲ့ dialog box ကို "စာလုံး" (ထိုသို့ပြုမှမည်သို့ပြုလုပ်အထက်တွင်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား) ။
အပိုင်းအဓိကထားခုနှစ်တွင် 3. မျဉ်းများနှင့်ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါကို select "အိုကေ".
ကောင်စီ: အလားတူလုပ်ရပ်များ Menu ခလုတ်ကိုသုံးပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ် "အောက်လိုင်းတား" (B က) ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, အဲဒီအက္ခရာမှဘေးကမြှားကို click ပြီးတော့နှစ်ဆလိုင်းလည်းမရှိ။
သင်သာကွာဟချက်မှုကိုအလေးအနက်အတွက်လုပျနိုငျသောအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း - ကဆင်းကျင်းပ pre-button ကိုအတူ keystroke "underscore" (ပေါ်မှာအထက်-ဒစ်ဂျစ်တယ်အရေအတွက် penultimate button ကိုလည်းတုံးတိုသည်) "Shift".
မှတ်ချက်: ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, underscore အစားနေရာထားနှင့်တစ်ဦးစံမျဉ်းသားအဖြစ်ကသူတို့ကိုအောက်စာလုံးထက်၏အောက်ပိုင်းအစွန်းအားဖြင့်ထိုအတူအဆင့်မှာဖြစ်လိမ့်မည်။
အချို့ကိစ္စများတွင်မီးမောင်းထိုးပြလိုင်းများ align လုပ်ဖို့၏ရှုပ်ထွေး - သို့သော်ဤနည်းလမ်းများထဲမှအဓိကအားနည်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာသတိပြုရကျိုးနပ်သည်။ ဒီကြည်လင်သောဥပမာတစ်ခုမှာ - ဖြည့်စွက်ရန်ပုံစံများကိုဖန်တီး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျသုံးနှင့် / သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြိမ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်နယ်နိမိတ်မျဉ်းကြောင်းမှာ underscore ဘို့က MS နှုတ်ကပတ်တော်ကို AutoFormat အော်တိုပြင် option ကိုအတွက် activated လျှင် "Shift + - (တုံးတို)"ရလဒ်အဖြစ်သငျသညျအမြားဆုံးကိစ္စများတွင်အလွန်အမင်းမလိုလားအပ်သောသောအပိုဒ်ရဲ့ width နဲ့ညီမျှတစ်လိုင်းရ။
ကိစ္စများတွင်လက်ျာဆုံးဖြတ်ချက်ကကွာဟမှုကိုအလေးပေးရန်လိုအပ်သောအခါ - tabs များ၏အသုံးပြုမှုသည်။ သင်ရုံနှိပ်ဖို့လိုအပ် "Tab ကို"ပြီးတော့ကွာဟချက်ကိုအလေးပေး။ သင်က web form မှာတစ်ဦးကွာဟမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြချင်လျှင်, သုံးစိမ်နယ်နိမိတ်နှင့်ဒီလိုပါပဲအောက်ခြေနှင့်အတူတစ်ဦးအချည်းနှီးသောစားပွဲပေါ်မှာဆဲလ်သုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်။ ဤအမှုနည်းလမ်းများအသီးအသီးအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအောက်ပါကြည့်ပါ။
သင်တစ်ဦးအာကာသအလေးပေးချင်ဘယ်မှာတည်နေရာ, နှင့်စာနယ်ဇင်းများတွင် 1. Place ဟာ pointer "Tab ကို".
မှတ်ချက်: အစားတစ်ဦးအာကာသ၏ဤအမှု၌အသုံးပြုသော tabs ။
အဆိုပါအုပ်စုတွင်တည်ရှိသောခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဝှက်ထားသောဇာတ်ကောင်များ၏ Display ကို mode ကိုအပေါ် 2. ပြန်လာ "Passage".
3. tab ကိုတဲ့ character set (ကသေးငယ်တဲ့မြှား၏ပုံစံကိုပြသပါလိမ့်မည်) ကိုရွေးပါ။
4. (က "မျဉ်းသား" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါB က) ကအုပ်စုတွင်တည်ရှိပြီး "စာလုံး"ဒါမှမဟုတ်သော့ကိုသုံးပါ "ကို Ctrl + ဦး".
ကောင်စီ: သင်မျဉ်းသားစတိုင်ကိုပြောင်းလဲလိုလျှင် (ဒီသော့ချက်၏ menu ကိုချဲ့ထွင်B က) ကလာမယ့်မြှားအပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, နှင့်သင့်လျော်သောစတိုင်ကိုရွေးပါ။
5. မျဉ်းသားထားသည့်အာကာသကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ လိုအပ်သောလျှင်, စာသားရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်အလားတူအရေးယူမှုလုပ်ဆောင်။
6. ဝှက်ထားသောဇာတ်ကောင်များ၏ Display ကို mode ကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ။
1. ကကွာဟမှုကိုအလေးပေးရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်ရာအရပ်မှာလက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
2. tab ကိုသွားပြီး "ထည့်" နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "စားပွဲတင်".
3. တစ်ခုတည်းဆဲလ်အတွင်းရှိစားပွဲ၏အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ, ထိုဖြစ်ပါတယ်ရုံလက်ဝဲပေါ်ပထမဦးဆုံးစတုရန်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
4. ဆဲလ်အတွင်းရှိလက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ကိုနှိပ်ပါစစ်ဆင်ရေးကျောက်ပြားကိုဖော်ပြရန်ဆက်ပြောသည်။
5. ဤအချက်မှာညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါနှင့် button ကို click "နယ်ခြားမဲ့"အဘယ်မှာရှိကို select လုပ်ပါစာရင်း "နယ်ခြားမဲ့နှင့်အရိပ်".
မှတ်ချက်: က MS နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဗားရှင်းအတွက်ကြိုတင် 2012 မှဆက်စပ် menu ကနေသီးခြားကို item လည်းမရှိ "နယ်ခြားမဲ့နှင့်အရိပ်".
6. tab ကိုသွားပြီး "နယ်စပ်ရေးရာ" ရှိရာအပိုင်း "အမျိုးအစား" ကို select "မဟုတ်ပါ"ပြီးတော့အောက်မှာ "နမူနာ" အောက်ပိုင်းကန့်သတ်နဲ့ layout ကိုစားပွဲပေါ်မှာကို select, ဒါပေမယ့်အခြားသုံးစရာမလိုဘဲ။ အပိုင်း "အမျိုးအစား" ဒါဟာသင်ရွေးချယ်ထားသောကြောင့်ပြသပါလိမ့်မည် က "Other"။ စာနယ်ဇင်းများ "အိုကေ".
မှတ်ချက်: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပမာမှာအထက်ပါလုပ်ရပ်များဖျော်ဖြေပြီးနောက်စကားများအကြားကွာဟချက်ကိုညင်ညင်သာသာရာအရပ်သို့မဟုတျဘဲပြောနေ underscore ။ သင်တို့သည်လည်းတူညီသောပြဿနာကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဒါကစာသားပုံစံချပေးကိုပြောင်းလဲရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းစာသား align မှ
7. ပုဒ်မ "စတိုင်" (tab ကို "ဒီဇိုင်နာ") တစ်ခု underscore အဖြစ်ထည့်သွင်းကြောင်းအရောင်နဲ့လိုင်းအထူ၏တပ်မက်လိုချင်သောအ type ကို select လုပ်ပါရန်။
အောက်ပိုင်းနယ်နိမိတ်ဖော်ပြရန်အလို့ငှာ 8. အုပ်စုသနျ့ "View" အဆိုပါကိန်းဂဏန်းအတွက်အောက်ခြေ margin ၏အမှတ်အသားများအကြား။
ကောင်စီ: မီးခိုးရောင်နယ်နိမိတ်မရှိဘဲစားပွဲပြသ (ပုံနှိပ်မဟုတ်), အ tab ကိုသှားဖို့ "Layout"အဘယ်မှာရှိအုပ်စု "စားပွဲတင်" ကို select "Show ကို Grid".
မှတ်ချက်: သင်တစ်ဦးအာကာသရိုက်ထည့်ရန်မလိုအပ်လျှင်ရှင်းလင်းစာသားကိုမျဉ်းသား, ပွင့်လင်းလူအပေါင်းတို့သည်ပထမဦးဆုံးနယ်နိမိတ်အောင်နေဖြင့်နှစ်ခုကိုဆဲလ် (အလျားလိုက်) တွင်စားပွဲ၏အရွယ်အစားကိုအသုံးပြုပါ။ ဤ box ထဲမှာဆန္ဒရှိစာသားကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ယင်းမျဉ်းသားနေရာများဖြည့်စွက်၏ဒီနည်းလမ်းရဲ့အကြီးအအားသာချက်ကတော့ underscore လိုင်း၏အရှည်ကိုပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအစားပွဲပေါ်မှာကို select နှင့်လက်ျာဘက်၏ညာဘက်အစွန်းကိုကျော်ပါကဆွဲထုတ်။
ကိန်းဂဏန်း underscores ထည့်သွင်းခြင်း
စံတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကို underscore လိုင်းများအပြင်, သငျသညျမြားကိုလညျးတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလိုင်းစတိုင်နဲ့အရောင်ရွေးနိုင်သည်။
2. Menu ခလုတ်ကို Expand "အောက်လိုင်းတား" (အုပ်စုတစ်စု "စာလုံး") အဲဒါကိုဘေးကတြိဂံအပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
3. မျဉ်းသားစတိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။ လိုအပ်သောလျှင်, အရောင်နဲ့လိုင်းရွေးချယ်ပါ။
ကောင်စီ: သငျသညျမလုံလောကျပြတင်းပေါက်တွင်ပေးထားသော Template ကိုလိုင်းများပါလျှင်, select လုပ်ပါ "အခြား underscore" ထိုအရပ်၌သင့်လျော်စတိုင်အပိုင်းကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစား "အောက်လိုင်းတား".
4. ပုံ underscore သင့်ရဲ့ရှေးခယျြစတိုင်များနှင့်အဆင်းအရောင်နှင့်အညီထည့်သွင်းထားသည်။
သင်မျဉ်းသားစကားစာပိုဒ်တိုများ, စာသားသို့မဟုတ်နေရာများဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်လျှင်ထည့်သွင်းဖို့အဖြစ်, တူညီတဲ့အရေးယူလုပ်ဆောင်။
2. သတင်းထုတ် "အောက်လိုင်းတား" အုပ်စုတစ်စု "စာလုံး" သို့မဟုတ်သော့ချက် "ကို Ctrl + ဦး".
ကောင်စီ: အထူးစတိုင်ရာ၌မျဉ်းသား, ခလုတ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန် "အောက်လိုင်းတား" သို့မဟုတ်သော့ချက် "ကို Ctrl + ဦး" နှစ်ကြိမ်နှိပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာယခုသင်နှုတ်ကပတ်တော်၌စကားလုံးများအကြားစကားလုံးတစ်လုံး, အက္ခရာသို့မဟုတ်အာကာသမီးမောင်းထိုးပြဖို့ဘယ်လိုသိအားလုံးပါပဲ။ အကြှနျုပျတို့သညျကိုစာသားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ဘို့ဤအစီအစဉ်၏နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တိုင်းအောင်မြင်မှုအလိုရှိ၏။